ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်သည် Pisces သို့မဟုတ် Aquarius လား။ - Oscရာဝတီ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်သည် Pisces သို့မဟုတ် Aquarius လား။
မေးခွန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများ - ဖေဖော်ဝါရီလ 27 ရက်မွေးနေ့ Horoscope 22
Theဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ရာသီဥတုကလူကိုပိုင်ရေငတ်-ငါးနယ်ခြား။ ဒါကို Sensitivity of Cusp လို့ခေါ်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကောင်းကင်ကြယ်နှစ်မျိုး၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဤရွေ့ကားဂြိုဟ် Uranus နှင့် Neptune ဂြိုဟ်ဖြစ်ကြသည်။
ကြည့်ရှုသူဟေ့၊ သင်ရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာကိုဂရုစိုက်သလား။ ဒီရက်တွေအားလုံးဒေါသထွက်နေတယ် ဆိုလိုတာကခင်ဗျားကသူတို့မပါဘဲတစ်စုံတစ် ဦး နဲ့သူတို့ရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကိုမပြောနိုင်ဘူး။ Zodiac နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများ၊ အကြိုက်ဆုံးအရောင်များပင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ယနေ့ဆောင်းပါးအတွက်အလွန်ကောင်းသည့်အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးသောအရောင်သည်သင်ထင်ထားသည့်အရာအပေါ်အခြေခံသည်အဝါရောင်ကိုနှစ်သက်သောအဝါရောင်ကိုနှစ်သက်သောအစိမ်းရောင်အညိုရောင်နှင့်ပန်းရောင်စောင့်သည် ဒုတိယအကြိမ်အရောင်အသွေးစုံလင်လှသောအမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ဤအရာအလုံးစုံအကြောင်းများနှင့်နောက်ထပ်အရာများဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ ၂၂ ရက်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ သင်တို့၏အကြိုက်ဆုံးအရောင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်လှပပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်သော Libra ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကြောင်းပြောဆိုရန်ပထမ ဦး ဆုံး Libra သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အခြေအနေကိုကာကွယ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ မင်းဘဝမှာမင်းကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုတာ
Libra အများစုသည်အပြာရောင်ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရောင်များအဖြစ်လူအများစုကစိတ်ကျဝေဒနာနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အရောင်သည်လူတစ် ဦး ၏ဘ ၀ တွင်တည်ငြိမ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်၎င်းသည် Libra အားအပြာအားတန်ဖိုးထားခြင်း၏အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏အဖွဲ့မှစိတ်အေးလက်အေးရှိခြင်းကသင်၏အကြောင်းကိုသင်၏ horoscope နှင့်မကိုက်ညီသလား။ အောက်တိုဘာ ၂၃ မှနို ၀ င်ဘာလ ၂၁ ရက်တို့ရဲ့သတ္တ ၀ ါအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့စတင်စကားပြောပါ။ Scorpios တွေဟာယေဘုယျအားဖြင့်တော်တော်ရဲရင့်ပါတယ်။ သူတို့မရှောင်ရှားရန်အရာများစွာမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်အနီရောင်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလည်းပုံဆောင်သည်။ ပုံမှန်ပေါ်ပြသခြင်း Scorpio သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပုံစံဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအမြဲတမ်းစောင့်မျှော်နေသည်။ ဒီအမဲလိုက်အမျိုးအစားဟာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုရှိနိုင်တယ်။ Scorpios များသည်အနီရောင်ကို ပို၍ ကောင်းမွန်သောအရောင်များဖြစ်စေရန်ဆွဲဆောင်နေသောကြောင့်သူတို့သည်အနီရောင်နှင့်တူသည်ကိုသတိရရန်သတိပြုမိသည်။ အကယ်၍ သင် Aries y ၌သိလျှင် Aries y တွင်မတ်လ ၂၁ ရက်မှ19ပြီ ၁၉ ရက်အကြား Aries y အစွန်း၌နေထိုင်သောသူတစ် ဦး အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအရိပ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာတကယ်ကိုပွင့်လင်းတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်သတိထားမိမှာပါ။ သူတို့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်၊
ဒါကြောင့်သူတို့ကလိမ္မော်ရောင်ကိုပိုနှစ်သက်ကြတယ်။ လိမ္မော်ရောင်သည်များသောအားဖြင့်စိတ်အားထက်သန်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်နွေရာသီနေရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်တန်ချိန်များကိုပေါင်းသင်းသည်။ ၎င်းသည်သင်လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာ၊ သင်ပူနွေးသောရာသီဥတုတွင်ရှိနေသောအချိန်ကိုကိုယ်စားပြုသည့်နည်းဖြင့်မရေမတွက်နိုင်သောရွှင်လန်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်မှစက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့အထိစိတ်ဖိစီးမှုများကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါ။ ဤပြဒါးကြီးစိုးသည့်နိမိတ်လက္ခဏာသည်အဖွဲ့အစည်းကို ဦး တည်သည်။ ဘဝသည်ပြီးပြည့်စုံနိုင်သည်ဆိုပါက Virgos များရှိလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်အရာအားလုံးကိုအမြင့်ဆုံးတွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အပျိုသည်ကြိုးစား။ အောင်မြင်မှုသို့မောင်းနှင်ပေးသောကြောင့်အဖြူရောင်သည်သူတို့၏ဉာဏ်အလင်းကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ သူတို့သည်အခြားသူများမဟုတ်သောအရာများကိုအမြဲတမ်းသတိပြုမိကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည် Sagittarius နိုဝင်ဘာလတွင်အောင်မြင်စွာရပ်တန့်သွားကြသည်။ ၂၂ မှဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်အထိသင်တွေ့ဆုံရမည့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောလူတစ် ဦး ပါသော Sagittarius သည်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာတွင်၎င်းတို့ကဲ့သို့သောလူများစွာလိုအပ်သည်။ Om, သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရောင်သည်ခရမ်းရောင်ဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမှာသံသယဖြစ်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ Sagittarius သည်ဟာသများစွာဖြင့်စွမ်းအင်ပြည့်ဝနေစဉ်၎င်းတို့သည်ဘဝ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုတွေးတောဆင်ခြင်ရင်းဤကျောက်တုံးပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ရည်ရွယ်ထားသောအရာသည်ဤကျောက်တုံးပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ရည်ရွယ်ထားသောအရာများကိုမကြာခဏတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ခရမ်းရောင်သည်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာသည်ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်မှဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်အထိဤ Saturn အုပ်ချုပ်သောနိဂုံးချုပ်နိမိတ်လက္ခဏာသည်အလွန်ကြီးကျယ်သောအလုပ်များဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့်မကြာခဏအလုပ်ကြမ်းလုပ်တယ်လို့စွပ်စွဲခံရတဲ့လူမည်းအနက်ရောင်ကိုနှစ်သက်တာကအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးရှိပြီးသေခြင်းတရားနဲ့မကောင်းမှုတွေကိုဆက်စပ်နေတယ်။ အချို့ကမူ Mac ht strict gth ၏သင်္ကေတအဖြစ်မြင်ကြသည်။ Aquarius ဇန်နဝါရီလ ၂၀ မှဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ အထိစွမ်းအားနှင့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအောင်မြင်ရန်စွမ်းရည်ရှိသော Aquarius သည်အခန်းထဲတွင်အဆင့်မြင့်အမြင်များရှိသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ed, ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူတို့လူမှုရေးပြissuesနာများနှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကယ်တင်ဖို့နည်းလမ်းတွေအကြောင်းပြောနေတာမတိုင်မီ 10 မိနစ်သူတို့ပင်အခန်းထဲမှာအခြားသူများထက်သူတို့ကပိုပြီးကျိန်းသေပိုပြီးအသံ, တကယ်ဟုတ်တယ် Turquoise ကိုတကယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ Turquoise ကိုသင်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ငါးမွေးကန်၏အရောင်ကဘာလဲ မိုးသည်းထန်စွာသင်္ကေတစိမ်းတစ်ခုသည်များသောအားဖြင့် Aquarius ၏ဖြစ်ရပ်တွင်ဉာဏ်ပညာနှင့်အကာအကွယ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည်မျှော်လင့်ခြင်းကအရာရာသည်ကျွန်ုပ်တို့လက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့လျှင်ကောင်းမွန်စွာထွက်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း၊ Aquarius သည်သူ၏ထင်မြင်ချက်အားလုံးနှင့်မကိုက်ညီသော်လည်း၊ အကောင်းဘက်မှရှုမြင်သည်။ ထို့ကြောင့်လီယိုသည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်နေထိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လ ၂၃ မှ ၂၂ ရက်။ ။ လီယိုသည်နေကိုအုပ်စိုးသောနေရောင်ခြည်နိမိတ်လက္ခဏာအတွက်နောက်ထပ်အကောင်းမြင်နိမိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်လီယိုသည်မျှော်လင့်ချက်မထင်ထားသော်လည်းအခြေအနေတွင်အပြုသဘောရှိနေသူဖြစ်သည်။ လီယိုသည်လူများကိုဤအရည်အသွေးများဖြင့်ဖျော်ဖြေရန်လည်းနေထိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်လူများကိုအဝါရောင်ဆွဲဆောင်သည်။ အဝါရောင်သည်အများအားဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်စွမ်းအင်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဟေးသည်အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ရှိပြီးအဝါရောင်သည်သင်မချစ်မီသင်နှစ်သက်သောအရာများအတွက်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ သင်၏ပင်ကိုစရိုက်များကိုမျှဝေသောမိတ်ဖက်ကိုရှာရန်သင်ကြိုးစားနေပါသလား။ အခြားသူများအပေါ်သူတို့၏သနားခြင်းကရုဏာတော်ကြောင့်လူသိများသော neptune နှင့် Jupiter Pisces တို့မှဝေမျှထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးရာသီဥတုအရောင်များစာရင်းသို့ယခုပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းသည်သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်မှုကိုသင်၏နိဒါန်းအမှတ်အသားအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ သူစိမ်းများကိုအတူတူပင်ဆက်ဆံသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအလေးအနက်ထားသည်။ ပန်းရောင်များ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ခင်မင်မှုကိုအလေးထားသည်။ ပန်းချီကားများတွင်ပါ ၀ င်သောအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးမှာပန်းရောင်နှင့်အလွန်အမင်းတုန့်ပြန်မှုရှိခြင်း peopleပြီ ၂၀ မှ ၂၀ အထိ Taurus ပတ်ပတ်လည်၌ခံစားရစေသည့်ပြissuesနာများနှင့်အတူလူများလာခြင်းသည်လူတို့အားအဆင်ပြေကြောင်းပြပါ။
ကြည့်ရှုသူဟေး! သင်ရာသီခွင်လက္ခဏာများကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား ဤသည်နေ့ရက်ကာလအမျက်တော်အရှိန်ဆိုလိုတာကမင်းကသူတို့ရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေနိမိတ်လက္ခဏာကိုသူတို့မပြောပဲစကားမပြောနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိသည်။ အကြိုက်ဆုံးအရောင်များပင်။
တကယ်တော့ဒီဟာကဒီနေ့ဆောင်းပါးအတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာပဲ။ ငါတို့အကြိုက်ဆုံးအရောင်ဟာမင်းရဲ့ရာသီခွင်အမှတ်အသားအပေါ်အခြေခံတယ်၊ ဘယ်သူကအဝါရောင်ကြိုက်တာလဲ ဘယ်အပြာကပိုပြာလဲ အစိမ်း၊ အညို၊ ပန်းရောင်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ တစ်စက္ကန့်, бирюзစောင့်ဆိုင်း? ဒီဟာကဘယ်နိမိတ်လဲ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ထိုအရာတွေအကြောင်းပြောနေတာပါ ...
Libra (စက်တင်ဘာ ၂၃ မှအောက်တိုဘာ ၂၂) Ah လှပပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်သော Libra ။ သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရောင်ကိုရှာတွေ့ဖို့၊ ငါတို့ရဲ့စရိုက်ကိုအရင်ပြောဖို့လိုတယ်။ Libra ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်ချောင်ဖြစ်ကြသည်။
သူတို့သည်များသောအားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်မည့်သူများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ လူနှစ် ဦး တိုက်ခိုက်နေလျှင်လစ်ဘရာကအခြေအနေကိုကာကွယ်ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့ဘဝမှာဒီလိုစိတ်ဖိစီးမှုမျိုးမလိုအပ်ပါဘူး။
Libra အများစုသည်အပြာရောင်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အပြာရောင်သည်အေးဆေးတည်ငြိမ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်ကျဆင်းမှုဖြစ်သည်။ အရောင်သည်လူတစ် ဦး ၏ဘ ၀ တွင်တည်ငြိမ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည်ဉာဏ်ပညာကိုလည်းဖော်ပြနိုင်သည်။
အကြေးခွံသင်ကောင်းစွာကောင်းစွာသူတို့ရဲ့အသိပညာပြသပါ။ သင်သည်သင်၏အုပ်စုတွင်ဖြေလျော့ပေးခြင်းရှိပါသလား မင်းရဲ့ horoscope ကမင်းအကြောင်းပြောတာနဲ့ဆန့်ကျင်သလား။ မှတ်ချက်များအပိုင်းကိုနှိပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သားရဲအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်စကားစပါ။ Scorpio (အောက်တိုဘာ ၂၃ မှနိုဝင်ဘာ ၂၁) Scorpios များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အတော်လေးသတ္တိရှိသည်။ သူတို့မရှောင်ရှားနိုင်သောအရာများစွာမရှိပါ။
၎င်းသည်အနီရောင်ကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ Scorpios မှပုံမှန်ပြသသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလည်းပြသသည်။ Scorpio သည်အချစ်ဇာတ်လမ်းသို့မဟုတ်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပုံစံဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေသည်။ ဤညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုသည်သူတို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။
Scorpios တွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ခုန်ချလိုက်တာနဲ့အနီရောင်ဟာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရောင်ဖြစ်လာတယ်။ အနီရောင်၏အသွင်အပြင်သည်အန္တရာယ်နှင့်ဆင်တူသည်။ ဤသည်အစွန်းပေါ်တွင်နေထိုင်သောသူတစ် ဦး အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအရိပ်သည်။
Aries (မတ်လ ၂၁ ရက်မှAprilပြီ ၁၉ ရက်) Aries၊ သူသည်သူနှင့်အလွန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြောင်းသင်သတိပြုမိပေမည်။ သူလိုချင်တဲ့နေရာကိုရဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်၊ သူ့ကိုဘာအနှောက်အယှက်မှမရှိပါဘူး။ ထို့ကြောင့် Aries သည်လိမ္မော်ရောင်ကိုပိုနှစ်သက်သည်။
လိမ္မော်ရောင်သည်များသောအားဖြင့်စိတ်အားထက်သန်မှု၊ သို့သော်ထိုထက်မကသောအရာရှိသည်။ များသောအားဖြင့်လိမ္မော်ရောင်၏အရိပ်များကိုနွေရာသီနေနှင့်ဆက်စပ်လေ့ရှိသည်။
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုမရေမတွက်နိုင်သောရွှင်လန်းစေသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ဒီဟာက Aries ဆီကို ဦး တည်နေတဲ့အလုပ်၊ နွေးထွေးတဲ့ရာသီမှာထိုင်၊ အနားယူပြီးစိတ်ဖိစီးမှုတွေအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုတော့တဲ့အချိန်ကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ Virgo (သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်မှစက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်) ဤမာကျူရီအုပ်ချုပ်မှုသည်အမြဲတမ်းအဖွဲ့အစည်းကို ဦး တည်သည်။
ဘဝကပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်အပျိုကညာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူတို့ကအရာအားလုံးကိုအမြင့်ဆုံးမှာထားတယ်။ White ကိုစုံလင်သောအရောင်အဖြစ်မကြာခဏရှုမြင်သည်။
များစွာသောကောင်းတဲ့မထင်မှတ်သောအရာများသည်သူတို့၏အိမ်ကိုဤအရောင်ခြယ်သခဲ့ကြသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပျိုကညာတစ်ယောက်ကြိုးစားအလုပ်လုပ်ပြီးအောင်မြင်မှုဆီသို့ ဦး တည်စေသောကြောင့်အဖြူရောင်သည်သူတို့၏ဉာဏ်အလင်းကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ သူတို့သည်များစွာသောအခြားသူများမဟုတ်သည့်အရာများကိုသတိပြုမိကြသည်။
Sagittarius (နိုဝင်ဘာ ၂၂ မှဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်) Sagittarius သည်သင်တွေ့ရမည့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးလူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်၎င်းတို့ကဲ့သို့သောလူများစွာလိုအပ်သည်။ သူတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည်အခန်းတစ်ခန်းကိုထွန်းလင်းစေသည်။ သူမအကြိုက်ဆုံးအရောင်မှာခရမ်းရောင်ဖြစ်သည်ကိုစဉ်းစားသောအခါမထင်မှတ်လောက်အောင်ဖြစ်သည်။
ခရမ်းရောင်အများကြီးသင်္ကေတနိုင်ပါတယ်။ Sagittarius သည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝပြီးဟာသဉာဏ်အလွန်ရှိသော်လည်းဘဝအဓိပ္ပာယ်ကိုသူတို့မကြာခဏစဉ်းစားကြသည်။ ဒီကျောက်ပေါ်မှာငါ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ အားလုံးဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ဤသည်ခရမ်းရောင်အတွက်လာရာအရပ်ဖြစ်၏။
ဒါဟာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မသိသော။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာသည်ကြီးစွာသောစနစ်တွင်မည်သို့ရှိကြောင်းဘုရားသခင်၏မေးခွန်းဖြစ်သည်။
Capricorn (ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်မှဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်) ဤ Saturn အုပ်ချုပ်သောနိမိတ်လက္ခဏာသည်တော်တော်လေးအလုပ်လုပ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အောင်မြင်ခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိသည်။ Capricorn ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုအရမ်းစွဲလန်းလွန်းလို့သူတို့ကိုအရမ်းအလုပ်ကြိုးစားသူအဖြစ်မကြာခဏစွပ်စွဲလေ့ရှိတယ်။
သူတို့ကအနက်ရောင်ကိုကြိုက်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ အနက်ရောင်သည်မတူညီသောအဓိပ္ပါယ်များရှိသည်။ အချို့က၎င်းကိုသေခြင်းနှင့်ဆိုးခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေစဉ်အခြားသူများကမူ၎င်းကိုတန်ခိုး၊ ခွန်အားနှင့်အခွင့်အာဏာတို့၏သင်္ကေတအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
Capricorns သည်၎င်း၏စွမ်းအားကိုကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအောင်မြင်နိုင်ခြင်းတို့အတွက်အနက်ရောင်သို့ဆွဲဆောင်သည်။ Aquarius (ဇန်နဝါရီ ၂၀ မှဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်) Aquarius သည်များသောအားဖြင့်အခန်း၏အဆင့်မြင့်အမြင်များနှင့်အတူလူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်းအဆင့်မြင့်ဆုံးမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အခြားသူများထက် ပို၍ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်သည်။ သူတို့သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာပြandနာများနှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကယ်တင်ရန်နည်းလမ်းများအကြောင်းမပြောမီ ၁၀ မိနစ်ခန့်တွင်ပင်အခန်းထဲ၌ပင်ရှိနေသည်။ တကယ်ပဲစောင့်ပါ အိုဟုတ်တာပေါ့။
Turquoise သည်အလွန်လေးသောသင်္ကေတရှိသည်။ Turquoise သည်များသောအားဖြင့်ဉာဏ်ပညာနှင့်ကာကွယ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Aquarius မှကျဆုံးခြင်း၌၎င်းသည်မျှော်လင့်ခြင်းကိုအလေးပေးဖော်ပြသည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာလက်တွေ့ကျတယ်ဆိုရင်အရာအားလုံးကောင်းကောင်းထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူး။ တစ် ဦး Aquarius သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်အားလုံးနှင့်အတူမဖြောင့်စေခြင်းငှါနေစဉ်, သူတို့ကဆက်ဆက်အရှိဆုံးအကောင်းမြင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်လူတွေဟာသူတို့အနားမှာရှိနေရတာကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။
လီယို (ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်မှသြဂုတ်လ ၂၂ ရက်အထိ) ဤသည်ယခုခေတ်ရာသီခွင်၏ထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ လီယိုသည်နေကိုအများအားဖြင့်အခြေအနေတစ်ခုတွင်အပြုသဘောဆောင်နေသူဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်စရာမရှိပုံရှိရင်တောင်မှ။
လီယိုသည်လူများကိုဖျော်ဖြေရန်လည်းနေထိုင်သည်။ ဤစရိုက်များနှင့်အခြားသူများသည်လူများကိုဆွဲဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့်အဝါရောင်သည်သူတို့၏အရောင်ဖြစ်သည်။
အဝါရောင်သည်များသောအားဖြင့်ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ လီယိုကိုဖော်ပြရန်ပိုကောင်းသောနည်းလမ်း။ သူတို့ဟာတကယ့်ကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်နေပြီးအချိန်ကောင်းတစ်ခုရှာဖွေနေတယ်။
အဝါရောင်သည်သူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသူတို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ မင်းတို့ရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေကိုမျှဝေထားသည့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး ကိုရှာရန်ငါတို့ထပ်မံမသွားမီကြိုးစားကြည့်ပါ။ သင်၏ရာသီဥတုအခြေအနေအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောပွဲကိုဆွေးနွေးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ယခုလူကြိုက်အများဆုံးရာသီဥတုအရောင်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းသို့ပြန်သွားပါ။
Pisces (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်မှမတ်လ ၂၀ ရက်) Pisces များသည် Neptune နှင့် Jupiter နှစ်ခုစလုံးဖြစ်ပြီးအခြားသူများအပေါ်သူတို့၏သနားခြင်းကရုဏာတော်ကြောင့်လူသိများသည်။ NS သူတို့ဟာသူစိမ်းတွေကိုသူငယ်ချင်းတွေလိုခံစားမှုတူညီစွာဆက်ဆံတယ်။ သူတို့၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသဘောသဘာဝကိုပန်းရောင်ဖြင့်အကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုသည်။
ပန်းရောင်အရောင်သည်များသောအားဖြင့်ခင်မင်မှုနှင့်ကြင်နာမှုကိုအလေးထားသည်။ ၎င်းဒြပ်စင်နှစ်ခုလုံးသည် Pisces တွင်ထင်ဟပ်သော်လည်းပန်းရောင်နှင့်အတူမျှဝေသည့်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးမှာလက်လှမ်းမီမှုဖြစ်သည်။ ငါးအလွန်လက်လှမ်းဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ပြသတဲ့သနားကြင်နာမှုကြောင့်လူတွေကပြproblemsနာတွေနဲ့သူတို့လာချင်ကြတယ်။ သူတို့ဝန်းကျင်မှာအေးဆေးတည်ငြိမ်တယ်။ Taurus (Aprilပြီလ ၂၀ မှမေလ ၂၀ ရက်) Taurus ကိုသင်အပြစ်တင်လို့မရပါဘူး။ ဒါကစိတ်မချရဘူး။
ဒါဟာသူတို့အသွေးထဲမှာမဟုတ်ဘူး။ Taurus လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုယ်နှိုက်ကမြှုပ်နှံပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်ချိန်တည်းမှာအများအပြား။
ဤအလုပ်များသည်တစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သူတို့ကအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အစိမ်းရောင်အရောင်ကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ကြသည်။
ငါတို့အများစုသည် 'စိမ်းလန်းသော' အသံကိုကြားသောအခါငွေကိုစဉ်းစားတတ်ကြသည်။ ကောင်းပြီ, အဲဒါထက်အနည်းငယ်ပိုရှိပါတယ်။ အစိမ်းရောင်သည်များသောအားဖြင့်ကြီးထွားမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
Taurus သည်ဘ ၀ တွင်တိုးတက်များပြားလာပြီးသူတို့အကြောင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလေ့လာသည်။ သူတို့မှာပြaနာတစ်ခုရှိရင်၊ သူတို့ဟာစွမ်းရည်အသစ်ဒါမှမဟုတ်စွမ်းရည်အသစ်နဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့အလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။
Gemini (မေလ ၂၁ မှဇွန် ၂၀) Gemini သည်အမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုစစ်တိုက်နေသည်။ ဆိုလိုတာကသူတို့ဟာတကယ်ကိုလူကောင်းတွေပါ။ သငျသညျစမတ်ခြင်းနှင့်အသည်းအသန်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သူတို့သည်လည်းမှောင်ခြမ်းဘက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ငါဆိုလိုတာကသူတို့မကြာခဏစိတ်မရှည်သို့မဟုတ်စိတ်ပျက်ရ။ ဒါကလူတွေကိုသူတို့ကိုကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့ခေါ်ဆိုတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရောင်ဟာမီးခိုးရောင်ဖြစ်တယ်။
အနည်းငယ်ပျင်းစရာအသံ, ဟုတ်တယ်မဟုတ်လော ခဏနားပေးပါ။ မီးခိုးရောင်သည်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကြားတွင်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ဟန်ချက်ညီသည့်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ဤသည် Gemini သူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာ၌ရှာသောအရာတစ်ခုခုသည်။
သူသည်သူတို့၏ဖိနပ်များ၌အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်သွားနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကင်ဆာ (ဇွန် ၂၁ မှဇူလိုင် ၂၂) ကင်ဆာသည်ရှေ့တန်းတင်လိုသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အထိခိုက်မခံတဲ့ဘက်ကနေတခြားသူတွေရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်ဖို့ပဲတစ်ခါတစ်လေအရမ်းကြမ်းတမ်းစွာပြုမူတယ်။
အမှန်မှာ၊ ကင်ဆာသည်သူတို့ဝန်းကျင်ရှိလူများကိုအလွန်ဂရုစိုက်သည်။ သူတို့သည်မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများအပေါ်အမှန်တကယ်သစ္စာစောင့်သိကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ ဦး စားပေးအရောင်မှာနဖူး is ဖြစ်သည်။
လူတွေကအညိုရောင်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါသူတို့ဟာဝမ်းနည်းပြီးအထီးကျန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ငါတို့မှာပျော်ရွှင်စရာအတွေးတွေရှိရင်စိတ်ထဲလာမှာမဟုတ်ဘူး။ ကင်ဆာအဘို့, အညိုရောင်ဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရကိုယ်စားပြုတယ်။
လူတွေဟာများစွာသောအားဖြင့်သူတို့ကိုမှီခိုနေရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာလိုအပ်တဲ့အချိန်တွေမှာယုံကြည်စိတ်ချနိုင်လို့ပါ။ ယခုခေတ်ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာသည်လူကြိုက်များသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
သင်ပိုမိုလေ့လာလိုပါသလား? ကောင်းပြီ၊ ငါထွက်ကြည့်ဖို့အခြားအရာအနည်းငယ်ရှိသည်။ မှောင်မိုက်တဲ့ဘက်ကိုသွားချင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးသည်ရာသီခွင်အမှတ်အသားတစ်ခုစီ၏အမှောင်ဘက်တွင်ကြည့်ပါ။ ပိုဆိုးသွားအောင်၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရာသီခွင်လက္ခဏာတွေကောဘယ်လိုလဲ။ ယခုတခုကို နှိပ်၍ သင်၏အမှတ်အသားလက္ခဏာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်မည်သည့်ရာသီခွင်အမှတ်အသားဖြစ်သနည်း ငါတို့အကြိုက်ဆုံးအရောင်နဲ့မှန်လား ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သိစေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်သံလိုင်းစာရင်းသွင်းရန်မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
အကယ်၍ သင်သည်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်တွင်မွေးဖွားပါကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
Pisces အဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ 27 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်,မင်းကလူသိများသည်မင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်း, ပင်ကိုယ်နှင့်ကြိုး။မင်းတက်ကြွသောစိတ်ရှိသည့်မင်းတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူဘဝ၏ရှုထောင့်အားလုံးနှင့်တွေ့ဆုံရန်အသုံးပြုပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းယူမင်း၏လောကသို့မင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်ပေမယ့်ကံကောင်းတာကမင်းရဲ့ပင်ကိုယ်သိသည်မင်းပြင်ပကမ္ဘာနှင့်ညှိ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ ၂.၂၅ ရက်ကိုပေါင်းလိုက်တယ်၊ သူတို့ပေါင်းလိုက်တယ်။ ၄ နှစ်တခါထပ်တိုးထပ်ထပ်ထပ်ထည့်လိုက်တယ်၊ အချိန်ကဒါနဲ့အမျှအရာရာတိုင်းဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီမှန်ကန်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလအထိအဲဒီနေ့မှာဖေဖော်ဝါရီအထိနည်းသွားတယ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလသည်အနည်းဆုံးရက်အနည်းငယ်သာရရသည့်အကြောင်းရင်းမှာသူ၏ညီသို့မဟုတ်အစ်ကိုဝမ်းကွဲတွင်လအသစ်ဖြစ်စေချင်သောရောမemကရာဇ်တစ်ပါးမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း၊ ဟုတ်သည်၊ သူသည်လတစ်လအတွက်ရက်ပေါင်းများစွာယူခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ခန့်အတွင်းဤခုန်ပျံကျော်လွှားမှုစနစ်နှင့်အလားတူအရာတစ်ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်သည် (သို့) ကျွန်ုပ်၏မွေးနေ့သည်နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ အတွင်း၌ပင်တည်ရှိမည်မဟုတ်ဟုလူအများကဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်တွင်မွေးဖွားမည့်အကြောင်းကိုငါ့ကိုမေးကြသည်။ အမှန်တကယ်တော့များသောအားဖြင့်တော့ဒီနေ့မွေးဖွားခြင်းနဲ့သိပ်ပြီးမတူပါဘူး၊ ငါပြောတာက 'အိုး၊ ဒါကဘာလဲ၊ ဘယ်လိုပုံစံလဲ၊ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားလာမလား။ ? '' ငါမသိဘူး 'လို့ဖြေလိုက်တာကနည်းနည်းတော့ခက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ သူပြောတာကအကောင်းအဆိုးတွေထက်ဆိုးကျိုးတွေပိုများပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မွေးနေ့၏အဓိကအရာမှာကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ညီမနှစ်ယောက်သည်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်သည်နှစ်တစ်နှစ်မဟုတ်သည့်အချိန်တွင်လူအများအပြားကကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်မေးမြန်းသောပထမမေးခွန်းကိုဖြေဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ခုန်သည်မဟုတ်လော။ 'နှင့်အဖြေသည်ခုန်ပေါက်သောနေ့တွင်မွေးဖွားလာသူများအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များကဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးချီတက်ပွဲကိုစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်အစ်မများကမတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကိုကျင်းပကြသည်။ ကျွန်ုပ်ပျော်စရာမိဘများ၊ အဲဒါက၊ ဒါပေမယ့် 'အိုး၊ ငါတကယ်ကွဲပြားချင်တယ် ... ' မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး။ သို့သော်မတ်လတွင်ပါတီဝင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အထားတစ်ခုမှာ၎င်းသည်နက္ခတ္တဗေဒအရပိုမိုမှန်ကန်သည်။
ငါ့မွေးနေ့အတွက်တစ်ရက်စောင့်ရတာစိတ်မပူပါဘူး ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခြင်းရဲ့အဓိကပြisနာကတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာအွန်လိုင်းပုံစံကိုဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ၎င်းသည်အရင်ကထက်ရှားပါးသည်၊ ကျွန်ုပ်အွန်လိုင်းပုံစံကိုဖြည့်စွက်ပြီးတဲ့နောက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ဘူး၊ သင့်မွေးနေ့ကိုရေးထည့်ရန်လိုအပ်သည့်ဆောင်းပါးဂိမ်းတစ်ခုကစားပါ။ အခုသူတို့မှာရွေးချယ်စရာအတော်များများရှိတယ်။ ငါထင်တာကတော့သူတို့ကမြန်မြန်မလုပ်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ပရိုဂရမ်ကိုပိုကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ခုန်ပျံတက်တဲ့နေ့မှာမွေးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြproblemsနာအများစုဟာမခုန်နိုင်တဲ့နှစ်မဟုတ်ဘူး၊ ဥပမာလေးခုအနက်ဥပမာ၊ Snapchat မွေးနေ့ filter သည်သင်၏မွေးနေ့ဖြစ်သည့်နေ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခုန်ပျံတက်သည့်နှစ်မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်ငါ့ကိုပေါ်မလာ။ - ကျွန်ုပ်သည် Snapchat မွေးနေ့ filter ကိုတစ်ခါမှမရိပ်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖြန့်ချိခဲ့သည် ! ငါအရမ်းဝမ်းနည်းတယ်မထင်ဘူး၊ ငါအတွက်မွေးနေ့လို့မခေါ်နိုင်ဘူး။ Snapchat ကိုပြောင်းပါ။ ငါ့ကိုတော်တော်ဝမ်းနည်းစေပြီးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာရှိတဲ့အခြားအရာတစ်ခုကအခုဒီဟာကိုပြင်လိုက်မယ်။
မသေချာဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်မအားတဲ့နှစ်မဟုတ်ရင်ငါ့သူငယ်ချင်းတွေဟာမနက်ဖြန်ဟာ Savannah ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအသိပေးလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာတော့ '' Savannah ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်မယ်။ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့! '- ဘာမှမရှိဘူး! ငါထင်တာကကုမ္ပဏီတွေ၊ လူမှုမီဒီယာစသည်ကခုန်နှစ်တွေကိုပိုပြီးကြည့်သင့်တယ်။ ဒါကခုန်ပျံတက်တဲ့နှစ်မဟုတ်ရင်မင်းမွေးနေ့ပွဲကျင်းပဖို့ဘယ်နေ့ရက်မှာရေးလို့ရမလဲ။ သစ္စာရှိကတ်ပြားများဖြင့်သင်ရရှိသောမွေးနေ့အပိုဆုများကဲ့သို့သူတို့ကိုကျွန်ုပ်အစဉ်သတိရလိမ့်မည်ထင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏မွေးနေ့တွင်သင်ကိုယ်တိုင်တစ်ခုခုရရှိပါက၎င်းသည်ခုန်ပျံတက်သည့်နှစ်မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကုမ္ပဏီများသည်ခုန်ပေါက်သောနှစ်တွင်မွေးဖွားသူများအတွက်အထူးကမ်းလှမ်းမှုများရှိသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းသည်၊ သို့သော် ၄ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာဖြစ်ခြင်း၊ သင်၏မွေးနေ့တွင်သင်မွေးဖွားသည့်အရာများနှင့်ပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ တစ်နှစ်မခုန်နိုင်ပေမယ့်တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားတာကတော်တော်အေးမြပြီးရှားပါးတဲ့မွေးနေ့လိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် 'မင်းငါ့ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာတစ်ခုခုပြောပြပါ' လို့ပြောတဲ့အခါငါအမြဲတမ်းအဖြေပဲ။ - 'ငါဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ “ မင်းသိတယ်၊ အမြဲတမ်းနောက်ပြန်လှည့်ဖို့အမြဲတမ်းတစ်ခုခုပဲ။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်တုန်းကလုပ်ခဲ့တာတွေပေါ့။ ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၁၆ ကိုကျွန်မ 4th ဖြစ်ဖို့ကြိုက်တယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလသည်မွေးနေ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လေး (လေးနှစ်) ကလေးဖြစ်လို။ အမှန်တကယ်မွေးနေ့များအကြောင်းပြက်လုံးပြုခြင်းကြောင့်ငါ့သူငယ်ချင်းများမှကဒ်ပြားကိုယနေ့ Peppa ဝက်လေး။ ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုမျိုး၊ ကျွန်တော်အသက် ၂၀ ရောက်ရင်၊ မွေးနေ့ငါးခုပြည့်တဲ့အချိန်မှာရမယ်၊ ဒါဆိုငါငါးနှစ်ပဲရှိမယ်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ ငါတော်တော်လေးပုံမှန်ပဲ၊ ငါဟာငါ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအဖြစ်အခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး၊
ငါအနည်းငယ်သောအရာများကိုလွဲချော်သည်၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအခြားလူများကဲ့သို့မွေးနေ့ဖြစ်သည်။ သင်မွေးနေ့ကိုဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင်မွေးနေ့သတင်းများနှင့်လက်ဆောင်များကိုမျှော်လင့်ကြသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်မွေးဖွားခြင်းနဲ့အဲဒီလိုမျိုးအခြားမေးခွန်းတွေရှိရင်၊ အဲဒါဟာသင်နှင့်အလွန်အလုပ်ရှုပ်နေလျှင်ငါ့ကိုသိပါစေ။ ငါအရမ်းရယ်ရတယ်အဲဒီအချိန်ကတည်းဖြတ်မှာမကောင်းတဲ့ကြောင့် By- တယ်ဖြတ်
အကယ်၍ သင်သည်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင်မွေးဖွားပါကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
သငျသညျရှိပါကဒီမှာဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်,မင်းရဲ့ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာသည် Pisces ဖြစ်သည်။မင်းရှုပ်ထွေးသော်လည်းအရာအားလုံး၏နောက်ကွယ်တွင်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ ချစ်ဖွယ်ကောင်းသော Pisces များရှိသည်။သင်လုပ်နိုင်သည်နှင့်ညှိပါစေမင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုများနှင့်မကြာခဏမဟုတ်ပါကအခြားသူများအားစာနာမှုပြသည်။မင်းစိတ်ခံစားမှုအားကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များကသင်၏မွေးသက္ကရာဇ်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုသတ်မှတ်သည်ဟုသိပ္ပံပညာရှင်များကသင်မွေးဖွားသည့်လသည်သင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုသတ်မှတ်ပေးသည်ဟုသိပ္ပံပညာရှင်များကသတိပေးသည်သင်ဂြိုဟ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအပေါ်အချို့သောသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့မွေးဖွားသည့်ရာသီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ ရာသီတစ်နှစ်စီ၌လူတို့သည်အဘယ်အရာကိုသတိထားသင့်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သင်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆုကြေးငွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သင်ပျော်လား? မင်းအလုပ် သို့မဟုတ်တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားပြီးသင်၏အလုပ်သည်သင်လုပ်သင့်သောအရာမဟုတ်သကဲ့သို့ခံစားမိပါသလား။ ဤဆောင်းပါးကိုလေ့လာပြီးသင်မွေးဖွားသည့်လပေါ် မူတည်၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုလေ့လာပါ။ Like ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါသတိရပါ။ ငါတို့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်သင်ဘာကြောင့်မွေးဖွားတာလဲ Budapest မှသိပ္ပံပညာရှင်များသည်မမွေးသေးသောကလေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟု Budapest မှသိပ္ပံပညာရှင်များကယုံကြည်သည်မှာအဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်းအံ့သြစရာကောင်းတာကမွေးဖွားတဲ့လက dopamine နဲ့ serotonin အဆင့်တွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့စိတ်စေတနာတို့ကိုပါအကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ စပိန်ရှိအလီကန့်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများသည်စိတ်ရောဂါနှင့်အတူလူတစ် ဦး မွေးဖွားသည့်လနှင့်နာတာရှည်ရောဂါများနှင့်အခြေအနေ ၂၇ ခုနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုတောင်မှသတ်မှတ်ထားသည်။ ယခုမွေးဖွားလနှင့်ရောဂါများကိုယခုကြည့်ကြစို့။ ကဆက်နွယ်။
ဇန်နဝါရီလ၊ ဆောင်းရာသီတွင်မွေးဖွားလာသူများသည်ယခုနှစ်အခြားအချိန်များတွင်မွေးဖွားခဲ့သူများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်။ အေးစိမ့်မှုရှိသည်။ သင့်ကိုပူနွေးစေရန်စွမ်းအင်အားလုံးလိုသည်။ မလိုအပ်သောစိတ်ခံစားမှုများမှမဖြုန်းတီးစေရန်သင်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်ယခုနှစ်ဤအချိန်တွင်သင်သည်နေရောင်များစွာမရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဆောင်းရာသီတွင်မွေးဖွားသူများသည်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်မွေးဖွားခဲ့သောစိတ်ဓာတ်နှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုနှိမ်နင်းလေ့ရှိပြီးမကြာခဏအစာအိမ်အနာ၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းများမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများတွင်ယောက်ျားနှင့်သွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာများအကြောင်းပြောသောအခါ (Gosh) ဇန်န ၀ ါရီလတွင်မွေးဖွားသောအမျိုးသားများအနေဖြင့်သူတို့သည်သိုင်းရွိုက်ပြproblemsနာကိုစက်တင်ဘာလတွင်မွေးဖွားသူများထက်သုံးဆလျော့နည်းလေ့ရှိသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလဖေဖေါ်ဝါရီလတွင်မွေးဖွားသောသူများသည်သူတို့၏ရိုးသားမှုကြောင့်ကျော်ကြားသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ဆံပင်ပုံစံအသစ်နှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရားကိုမကြားလိုလျှင်မမေးပါနှင့် သူတို့ကို။
သူတို့နှစ် ဦး ဟာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပြီးသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုလည်းရှိကြတယ်။ ပိုကောင်းလေသင်ဘယ်သူပြောမလဲ။ ဘယ်သူမွေးတာလဲ၊ ဖေဖော်ဝါရီကသိုင်းရွိုက်ပြproblemsနာတွေ၊ osteoarthritis၊ ယောက်ျားတွေမှာနှလုံးရောဂါနဲ့အမျိုးသမီးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသတိထားသင့်တယ်။ မတ်လနွေ ဦး ရာသီမှာမွေးဖွားသူအားလုံး hyperthermia ရှိတယ် နာမ၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသေစေနိုင်သောရောဂါ (ပြက်လုံးမရှိ) ကဲ့သို့မြည်သော်လည်းလူများသည်မတ်လ၊ Aprilပြီနှင့်မေလများတွင်သူတို့၏မွေးနေ့သည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီးအကောင်းမြင်သူများဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဒီရောဂါဟာမတ်လမှာမွေးဖွားတဲ့အမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ ရောဂါလက္ခဏာများကရင်ကြပ်ရောဂါနှင့်နှလုံးပြproblemsနာများဖြစ်နိုင်ပြီးအမျိုးသမီးများအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ differentပြီလကွဲပြားခြားနားသောရောဂါများနှင့်အတူအလားတူဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူနောက်ထပ်နွေ ဦး လ။
Aprilပြီလတွင်မွေးဖွားသောthyပြီလတွင်မွေးဖွားသောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည် bronchitis အကျိတ်များနှင့် o steoporosis ကိုလေ့လာသင့်သည်။ သိုင်းရွိုက်လူနာများအနေဖြင့်သိုင်းရွိုက်လူနာများတွင်အရိုးပွရောဂါဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ မေလတွင်မွေးဖွားသူများသည်များသောအားဖြင့်ရည်မှန်းချက်ကြီးပြီးအလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်သော်လည်းငွေအမြောက်အများကိုသုံးစွဲလေ့ရှိပြီးအလွန်စိတ်ခံစားမှုရှိကြသည်။ သူတို့ကအလျင်အမြန်ဒေါသထွက်နိုင်တယ်။ မေလမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီအမျိုးသားတွေဟာပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းစတဲ့ပြhaveနာတွေရှိနိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးများမှာအရိုးပွရောဂါ၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်ဓာတ်မတည့်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ နွေရာသီတွင်မွေးဖွားသောသူများသည်ဤကမ္ဘာကိုအပြုသဘောမြင်ကြသည်။ သို့သော်သူတို့သည် cyclothymia သို့တိမ်းယိမ်းလိုကြသည်။ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ရှားပါးသောအခြေအနေများတွင်သာမကြာခဏစိတ်အပြောင်းအလဲများသည် Cyclothymia သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါ (စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါ) သို့မဟုတ်သူရဲ - စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓာတ်ကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲသည်ထင်ရှားသည်။ ဆောင်းရာသီမွေးဖွားသူများအတွက်၊ ဇွန်လတွင်မွေးဖွားသောအမျိုးသားများသည်မျက်စိအတွင်းတည့်တည့်၊ နာတာရှည် bronchitis နှင့်နှလုံးရောဂါ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းဆီးသွားခြင်းနှင့်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းမှခံစားရသည့်အမျိုးသမီးများနှင့် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကျောရိုးနာကျင်မှုခံစားနေရသူများဖြစ်သည် ဇွန်လတွင် ၃၅ ရာနှုန်းမှာသွေးဆုံးလက္ခဏာများနှင့် ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါရှိကြသည်။ ဇူလိုင်လဇူလိုင်လတွင်မွေးဖွားသောသူများသည်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဂရုစိုက်ကြပြီးချစ်ခင်ကြင်နာတတ်ကြသည်။ သူတို့သည်စိတ်ထိခိုက်လွယ်ပြီးစိတ်နာကျင်လွယ်သောရောဂါများရှိသူများကိုအလွန်အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ အဆစ်ရောင်နာနှင့်နာတာရှည်လည်ပင်းနာခြင်းဝေဒနာများခံစားရနိုင်သည်။ မင်းရဲ့လည်ပင်းသြဂုတ်လမှာမြင့်မားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုခံရပြီးအလုပ်ကြိုးစားတဲ့လူတွေကကျော်ကြားလာတတ်ကြတယ်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအထူးသံသယရှိကြတယ်။ သြဂုတ်လမှာမွေးဖွားလာတဲ့ယောက်ျားတွေ၊ အရိုးပွရောဂါ၊ ရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်သိုင်းရွိုက်ပြproblemsနာများအမျိုးသမီးများအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဆောင်း ဦး ရာသီ၌မကြာခဏမြန်ဆန်ကြသည်။
စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာနှင့်နိုဝင်ဘာလများတွင်မွေးဖွားသူများအတွက်သတင်းကောင်းများလည်းရှိပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါတို့မှအများအားဖြင့်ခံစားရလေ့မရှိချေ။ စက်တင်ဘာလတွင်မွေးဖွားသူတိုင်းသည်အရိုးပွရောဂါနှင့်သိုင်းရွိုက်ပြproblemsနာများနှင့်ကြုံတွေ့နိုင်သည်။ အမျိုးသားများတွင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အမျိုးသမီးအကျိတ်များရှိနိုင်သည်။ သို့သော်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသတင်းမှာစက်တင်ဘာလတွင်မွေးဖွားသောလူအားလုံးသည်ဆိုးရွားသောအခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ နာတာရှည်နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းမှအောက်တိုဘာသင်ငြင်းနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်းအောက်တိုဘာလတွင်မွေးဖွားသူများသည်အလွန်သြဇာရှိပြီးအချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်နှင့်အတူဤအချက်သည်သူတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအလွန်ဖြစ်စေသည်အောက်တိုဘာလတွင်မွေးဖွားသောသုံ့ပန်းများယောက်ျားများသည်သိုင်းရွိုက်ပြproblemsနာများဖြစ်လေ့ရှိပြီးရွှေ့ပြောင်းအမျိုးသမီးများမှာဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည် သွေးအားနည်းရောဂါနှင့်မြင့်မားသောကိုလက်စထရောရှိခြင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးသည်အရိုးပွရောဂါဖြစ်နိုင်သည်နိုဝင်ဘာဤချောမောသောလူများသည်အလုပ်ကြိုးစားသူ၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးစုဆောင်းထားသည့်ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုသစ္စာစောင့်သိနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနေရာအချို့လည်းလိုအပ်သည်။ နို ၀ င်ဘာလတွင်မွေးဖွားသောလူတွင်နာတာရှည်အရေပြားရောဂါများနှင့်နှလုံးနှင့်သိုင်းရွိုက်ပြproblemsနာများရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည်နှလုံးရောဂါ၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊
အချက်တစ်ချက်မှာနို ၀ င်ဘာလတွင်မွေးဖွားသောအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်သွေးဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်မွေးဖွားသောလူများမှာများသောအားဖြင့်ရယ်စရာများဖြစ်သည်။ သင်အလွယ်တကူမိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်ပြီးအထင်ကြီးလေးစားဖွယ်ကောင်းသူများလည်းရှိနိုင်သည်။ ယခုနှစ်နောက်ဆုံးလတွင်မွေးဖွားသည့်အမျိုးသမီးများသည်မျက်စိအတွင်းတိမ်၊ စိတ်ကျရောဂါနှင့်နှလုံးပြproblemsနာများဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည်ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါနှင့်နာတာရှည်အဆုတ်ရောင်ရောဂါများဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင်မွေးဖွားပြီးနောက်လူကြိုက်အများဆုံးအလုပ်အကိုင်များအတွက်ဆုကြေးငွေသည်အချိန်ဖြစ်သည်။ လ, သင်မှားယွင်းတဲ့အရာရွေးချယ်ရာတွင်နိုင်သလားထွက်ရှာရန်အဆင်သင့်? အချို့သောစရိုက်လက္ခဏာများနှင့်ရောဂါများနှင့်အတူအချို့သောလများ၌မွေးဖွားသောသူများသည်အချို့သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဇန်နဝါရီလတွင်မွေးဖွားသူများသည်စုဆောင်းသူများနှင့်ကြွေးမြီများနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များဖြစ်လာနိုင်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလတွင်မွေးဖွားသူများသည်အနုပညာရှင်သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေသူများဖြစ်လာနိုင်သည်မတ်လတွင်မွေးဖွားသူများသည်ဂီတသမားများသို့မဟုတ်လေယာဉ်မှူးများဖြစ်လာနိုင်သည်။ Aprilပြီလတွင်မွေးဖွားသူများသည်အာဏာရှင်များ၏အုပ်စိုးမှုဖြစ်လာနိုင်သည်မေလတွင်မွေးဖွားသူများသည်အားကစားသမားများသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားများဖြစ်လာနိုင်သည်ဇွန်လတွင်မွေးဖွားသောသူများသည်စီအီးအိုများသို့မဟုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များဖြစ်လာနိုင်သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေသူများသြဂုတ်လတွင်မွေးဖွားသူများသည်ဆောက်လုပ်သူများသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားများဖြစ်လာနိုင်သည်။ စက်တင်ဘာလတွင်မွေးဖွားသောသူများသည်အောက်တိုဘာလတွင်မွေးဖွားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကျောင်းသားများသို့မဟုတ်အားကစားသမားများဖြစ်လာနိုင်သည်။ နိုဝင်ဘာလတွင်မွေးဖွားခဲ့သောနိုင်ငံရေးသမားများဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင်မွေးဖွားသူများသည် Ventas သို့မဟုတ် Messiah ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းဘဝမှာမင်းနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရယ်မောလိုက်တာလား။ ဒါ့အပြင်ဒီသုတေသန၏ရလဒ်များကိုအလေးအနက်ထားယူပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိရာသီဥတုအခြေအနေများသည်အရာရာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ကိုမမေ့ပါနှင့် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သည်။ သင်ဇွန်လတွင်အောက်တိုဘာလတွင်မွေးဖွားခဲ့သူနှင့်သင်နိုင်ငံရေးသမားများဖြစ်သင့်သည့်စီအီးအိုများ၏စရိုက်များအားလုံးမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းသင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါကသင်၏အကြံဥာဏ်များကိုအသိပေးပါ
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်ဘယ်ကြယ်ပွင့်ကဘယ်မှာလဲ။
အတူသဟဇာတဆုံးအရိပ်လက္ခဏာငါးယေဘုယျအားဖြင့် Taurus, Cancer, Scorpio နှင့် Capricorn တို့ဖြစ်သည်။ နှင့်အတူအနည်းဆုံးသဟဇာတနိမိတ်လက္ခဏာများငါးယေဘုယျအားဖြင့် Gemini နှင့် Sagittarius ဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ နေရောင်နိမိတ်လက္ခဏာများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကယေဘူယျအားဖြင့်သဟဇာတဖြစ်စေသည်။
ph ဖီကို (နက္ခတ်ဗေဒင်) - ဝီကီပီးဒီးယား။
သူတို့ရဲ့နွေရာသီမှာမွေးဖွားတဲ့ရွယ်တူချင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ဖေဖော်ဝါရီကလေးများကမ္ဘာပေါ်ရှိယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေး ၂၁၀၀၀ ၏အချက်အလက်များအရမွေးဖွားချိန်တွင်ပိုမိုရှည်လျားပြီးပိုလေးလာပြီး ၇ နှစ်အရွယ်တွင်ပိုမိုကြီးထွားလာသည်။ ဤရွေ့ကားကြီးမားသောကလေးတွေအလားတူအာရုံကြောသိပ္ပံစမ်းသပ်မှုအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်း။၁ ။ 2018 ။
Pisces Soulmate ကဘယ်သူလဲ။ Pisces သည်အိပ်မက်ဆန်သော၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရှာဖွေသည်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့နှင့်အတူဝိညာဉ်ရေးအရအောင်မြင်မှုရလိမ့်မည်Taurus zodiac။ Taurus Pisces ၏ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ဖြစ်နိုင်သည်။ Taurus လက်တွေ့ကျတဲ့ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပြီး, Pisces ဖို့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်သည်။နှစ်ဆယ်။ 2020 ။
(ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်မှမတ်လ ၂၀ ရက်)Pisces သည် Zodiac တွင်အကောင်းဆုံးအနမ်းများဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုလုပ်သည့်အခါကိုယ်ကျိုးမငဲ့သောကြင်နာပြီးတိတ်ဆိတ်သောစိတ်အားထက်သန်သောဝိညာဉ်များဖြစ်သည်။ ထိုမျှမကအသည်းအသန် Gemini နှင့်မတူဘဲသူတို့သည်အရာရာကိုကြာရှည်စွာအာရုံစိုက်နိုင်ပြီး၎င်းသည်သင်နှစ်သက်သောအရာဖြစ်သည့်အတွက်သင်အလွန်ကံကောင်းသည်။ဆယ့်ငါး 2016 ။
Pisces ဖြစ်ပါတယ်အလှဆုံး zodiacလက်မှတ်ထိုး၁၇ ။ 2021 ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Pisces အားလုံးကအများဆုံးအကြံပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုင်းဘုတ်များ။ Pisces ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲdumbest နိမိတ်လက္ခဏာ၏ရာသီခွင်, ရယ်မောခြင်း, နောက်ပြောင်ခြင်းနှင့်ကဲ့ရဲ့မှုအတွက် 'သွား -to schmuck' ။ မင်းကနက္ခတ်ဗေဒင်wimp, ငါတို့ရှိသမျှသည် 'သိပ်အထိခိုက်မခံ' နှင့် 'အရမ်းစိတ်ခံစားမှု' အဖြစ်ငါတို့သိသောတ7 2020 ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်အတွက်ရာသီခွင်အမှတ်အသားကဘာတွေလဲ။
သငျသညျနားလည်မှုနှင့်သနားကြင်နာတတ်ကြသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်အတွက်ဆိုင်းနိုင်းအမှတ်အသားသည် Pisces ဖြစ်သည်။ သငျသညျချစ်ခင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသော - သွားဖြစ်ကြသည်။ ဤအရည်အသွေးကောင်းများ၏စာရင်းသည်ရှည်လျားသည်။ သငျသညျလူတိုင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ မတူညီသောဉာဏ်စမ်းပဟေesိများကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ သို့သော်သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ခြင်းကသင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်အတွက်ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာများကဘာတွေလဲ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားလာပါကသင်၏နိဒါန်းဆိုင်းဘုတ်သည် Pisces ဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်မွေးနေ့သည်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စိတ်ရှည်မှုကိုပြသသည်။ နေကအရာအားလုံးကိုနေအောက်မှာဖော်ပြသည်!
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကျော်ကြားတဲ့ရေအိုင်အချို့ကဘယ်သူတွေလဲ။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားတဲ့ Pisces တစ်ယောက်အနေနဲ့မင်းဟာသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊